'नेपालनाम्चा'को नयाँ स्तम्भ 'प्रधानमन्त्री'मा प्रम केपी ओली, हरि अधिकारीको खरो टिप्पणी
‘नेपालनाम्चा’को नयाँ स्तम्भ ‘प्रधानमन्त्री’मा प्रम केपी ओली, हरि अधिकारीको खरो टिप्पणी
nepalnamcha.com२०७७ माघ २९
नेपालनाम्चाले सुरु गरेको नयाँ स्तम्भ ‘प्रधानमन्त्री‘को पहिलो अंक हो यो । यस स्तम्भमा नेपालमा अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरुमाथि अनेक कोणबाट टिप्पणी, विश्लेषण र अन्र्तवार्ताहरु समेटिनेछन् ।
बहुचर्चामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अनेक आयामबाट खोतल्ने प्रयत्न गरिएको छ, यस पटक यहाँ । सिर्जनात्मकसाथै आलोचनात्मक चेतले प्रखर भनिएर चिनिएका हरि अधिकारीसँगको वार्ता प्रस्तुत छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली । तर, उनी पूर्व प्रधानमन्त्री पनि । प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीबीच के फरक पाउनुहुन्छ ? कि केही फरक पाउनु हुन्न ?
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले केपी कामरेडको सम्मानित स्थानबाट च्युत हुने काम गर्न भ्याएका थिएनन् । बिचौलियाहरूको चङ्गुलमा पूरै फसिसकेका पनि थिएनन् । त्यसैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिलेका भूपू प्रम ओली ठीकै जस्ता लाग्दथे । अहिले त पूरै बेकम्मा साबित भएका छन् । फरक आफैँ पत्ता लगाउनोस् ।
प्रधानमन्त्री नहुँदाका केपी ओलीलाई कसरी व्याख्या गर्नु हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री नहुँदाका खड्गप्रसाद ओली प्रमको पद प्राप्त गर्ने एक मात्र एजेण्डा बोकेर हरेक प्रकारका षडयन्त्रका तानाबाना बुनिरहेका सत्ताखोर व्यक्ति थिए जस्तो लाग्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली । र, एमालेमै पनि प्रतिपक्ष ओली हुँदाका उनलाई कसरी सम्झनु हुन्छ ?
उनले जुन हैसियतमा भए पनि आफू र आफ्नो महत्वाकांक्षालाई केन्द्रमा राख्ने गरेका छन् । उनी यो एकसूत्रीय एजेण्डामा सफल पनि हुँदै आएका छन् ।
व्यक्ति केपी ओलीलाई त ?
केपी ओली व्यक्तिका रूपमा निकृष्ट लाग्छन् । चरम् स्वार्थी, षडयन्त्रकारी, अहंकारी, बैगुनी र आफूलाई लाभ मिल्दैन भने देश नै भड्खालोमा परे पनि परोस् भन्ने ध्वंशवादी ।
उनी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता । तर, उनमा अग्रगामी चेतना ज्यादा पाउनुहन्छ कि यथास्थितिवादी वा प्रतिगामी चेतना ?
केपी ओलीलाई उनको सोच, बोलीवचन, रहनसहन र सामाजिक व्यबहार कुनै हिसाबले पनि कम्युनिस्ट भन्न मिल्दैन । यिनी घोर दक्षिणपन्थी हुन् ।
केपी ओलीको राजनीतिक जीवनलार्ई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
केपी ओली लहैलहैमा झापा विद्रोहमा लागेका र त्यो मुद्दा सङ्गीन भएकोले लामो कारावासको सजाय भोग्न बाध्य सामान्य व्यक्ति हुन् । मेहेनती र उग्रमहत्वाकांक्षी भएकोले यिनले जेलमा रहँदा धेरै पढे, बुझे र तत्कालीन मालेको राजनीतिमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्दै अघि बढ्दै गए । त्यति हो ।
उनको राष्ट्रवादलाई पनि धेरैले धेरै तरिकाले व्याख्या गर्छन् । तपाईंको बुझाई के हो ?
केपी ओली जस्ता चरम् दक्षिणपन्थी सत्ताखोर व्यक्तिहरूका लागि राष्ट्रवाद जनतालाई झुक्याउने एउटा बलियो उपकरण हो ।
केपी ओलीको वाककला वा वाक’कड्क’प्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?
कुरा गर्न जान्दछन् । अरूलाई उडाउन, होच्याउन, विषय-वस्तुलाई मूल मुद्दाबाट भड्काउन र फटाहा कुरालाई साँचो जस्तो पारेर प्रस्तुत गर्ने कला विकसित गरेका छन् यिनले । तर, ढाँटेको कुरो काटे मिल्दैन भनेझैँ यिनको फट्याइँको पोल खुल्न थालेको छ आजभोलि ।
अहिले उनी ‘केपी बा’ का रुपमा प्रचारित छन् । त्यसबारे केही भन्नु हुन्छ कि ?
उनले सत्ताको दुरुपयोग गरेर पालेका भत्खौरेहरूले गर्ने सम्बोधन हो त्यो ‘बा’ भन्ने ।
यता काठमाडौंमा ‘केपी! आइ लभ यु’ एकातिर र अर्कोतिर ‘केपी! आइ हेट यु’ को नारा चलिरहेको छ । तपाई कतातिर ?
म कुनै नेतालाई लभ यु वा हेट यु भन्दै हिंड्ने व्यक्ति नभएकोले तपाइँको प्रश्नको उत्तर दिइरहन परेन मलाई । तर केपी ओलीले जसरी यो पूरा पद्धतिलाई जडमूलदेखि उखेल्ने उपद्रो गरिरहेका छन्, त्यसको आलोकमा हेर्दा यी समसामयिक नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा भयानक खलनायक हुन् त्यसैले हेटफुल, घृणायोग्य छन् ।
नेपालमा गणतन्त्रको आन्दोलन चलिरहँदा ‘बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिदैन’ उनले भने भन्ने कुरा अहिले पनि बेलाबेला उठ्छ । तपाई अहिले अमेकिामै हुनुहुन्छ । के अमेरिका बयलगाडा चढेर पुगिदैन ?
निश्चय नै हो, अमेरिका बयलगाडाको सवारी गरेर पुग्न सकिंदैन । यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ: तीन त्रिलोक चौध भुवनका गफ हाँकेर, ठग बिचौलियाहरूको सल्लाहमा चलेर र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेर देशको विकास गर्न सकिंदैन ।
र, अन्त्यमा, उनको एक सबैभन्दा असल र खराब पक्ष ?
केपी ओलीका खराब पक्ष यति धेरै उजागर भएका छन्, अब त तिनको चरित्रमा कुनै असल पक्ष पनि छ र ? भन्नू पर्ने भएको छ ।